प्रमुख समाचार | Naya Yougbodh National Daily | Page 244 Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार (page 244)
पा“चै निर्वाचन क्षेत्रमा कर्माचार्यको सम्झना
July 31, 2013	0 455 Views
युगबोध समाचारदाता घोराही, १५ साउन । एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ले नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा एकताभन्दा टुटफुटको समस्या बढी रहेको भन्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि बाम एकता र सहकार्यको खा“चो भएको बताउनुभएको छ । एमाओवादी दाङ क्षेत्र नं. ३ ले ...
नेसंवि इकाईमा प्रजातन्त्रवादी प्यानल विजयी
July 31, 2013	0 489 Views
युगबोध समाचारदाता घोराही, १५ साउन । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ केन्द्रीय कार्यालय इकाई समितिको मंगलवार भएको निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघको प्यानल विजयी भएको छ । निर्वाचनबाट अनिल पोख्रेल ८६ मत प्राप्त गरी अध्यक्ष्ँमा विजयी हुनुभएको छ । उहॉका प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त प्यानलका डम्बरबहादुर ...
बागेश्वरी सावउसको अध्यक्षमा जगवीर
July 31, 2013	0 480 Views
युगबोध समाचारदाता घोराही, १५ साउन । बागेश्वरी सामुदायिक वन स्यूजाको सातांै साधारणसभाले जगवीर कामीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नया“ कार्यसमिति चयन गरेको छ । मंगलवार भएको साधारणसभाले समितिको उपाध्यक्षमा ओवाराम भट्टराई, सचिवमा पोषणराज विष्ट, सहसचिवमा रिखा घर्ती, कोषाध्यक्षमा अस्मिता विष्ट चयन हुनुभएको छ । ...
पत्रकार र सगीतकर्मीले बनाए वृत्तचित्र
July 31, 2013	0 623 Views
यमलाल भुसाल बुटवल, १५ साउन । वरिष्ठ समाजसेवी मनवीर गर्वुजाको जीवनीमा आधारित वृत्तचित्र ‘उनी दानवीर गर्वुजा’ निर्माण गरिएको छ । पत्रकार यम राना र संगीतकर्मी हितान शुक्रको अवधारणामा निर्माण गरिएको वृत्तचित्रमा स्व. गर्वुजाले समाजमा पु¥याउनुभएको योगदान, सामाजिक भूमिका र विभिन्न क्षेत्रमा उहा“ले ...
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रुकुम राप्तीमै अगाडि
July 31, 2013	0 693 Views
युगबोध समाचारदाता रुकुम, १५ साउन । स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगको सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा लिएको न्यूनतम शर्तमापन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसिपिएम) मा रुकुम राप्ती अञ्चलमै अगाडि आएको छ । राप्तीका दाङ, प्युठान, रोल्पा र सल्यानलाई पछि पारेको रुकुमले न्यूनतम शर्तमापन तथा ...
अपाङ्गलाई कम्प्युटर तालिम
July 31, 2013	0 672 Views
युगबोध समाचारदाता तुलसीपुर, १५ साउन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि तीन महिने कम्प्युटरसम्बन्धी प्रशिक्षण मंगलबारदेखि तुलसीपुरमा शुरु भएको छ । अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्र तुलसीपुरकोे आयोजना तथा जिल्ला विकास समिति दाङको सहयोगमा आधारभूत कम्प्युटरसम्बन्धी प्रशिक्षण शुरु भएको हो । संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष यज्ञबहादुर ...
चार घर पहिरोको जोखिममा
July 31, 2013	0 634 Views
युगबोध समाचारदाता रुकुम, १५ साउन । जिल्लाको खोलागाउ“ गाविस वडा नं. ७ भिरमौरीका चार घरहरु पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । अविरल वर्षाका कारण स्थानीय रत्नबहादुर खत्री, लालबहादुर खत्री, शशीराम गौतम र प्रेमबहादुर खत्रीका घर पहिरोको जोखिममा परेका हुन् । ६ दिनदेखि लगातार ...
हुलाकी सडक उपभोक्ता समिति गठन
July 31, 2013	0 657 Views
युगबोध समाचारदाता लमही, १५ साउन । लमही–कोइलावास सडक निर्माण कार्यमा ढिलाइ र वर्षायाममा पटक–पटक सडक बिग्रदा यातायातमा कठिनाइ भएपछि सो सम्बन्धमा लमहीमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले सडक मर्मत तथा निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न १८ सदस्यीय लमही–कोइलावास हुलाकी ...
प्युठानमा साढे ११ करोड फ्रिज
July 31, 2013	0 627 Views
युगबोध समाचारदाता प्युठान, १५ साउन । प्युठान जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा ११ करोड ५६ लाख २६ हजार ६ सय ९४ रुपैया“ ९२ पैसा विभिन्न कार्यालयबाट फ्रिज भएको छ । विभिन्न शीर्षकमा आएको रकम खर्च नभएपछि फ्रिज भएको हो । चालु र पू“जीगत ...
हात्तीखर्क टोलमा चार शौचालय बा“की
July 31, 2013	0 615 Views
युगबोध समाचारदाता घोराही, १५ साउन । घोराही– ६ को हात्तीखर्क टोलमा चारवटा मात्रै शौचालय बनाउन बा“की रहेका छन् । उनीहरुको पनि चा“डै निर्माण गरिने टोल समितिले जानकारी दिएको छ । सबैले शौचालय सामग्री जम्मा गरिसकेको टोल समितिका अध्यक्ष झगबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । उहा“का ...